Mawduuca 5 Shaqo, nolosha shaqada iyo suuqa shaqada
Somali • Soomaali
1: Haajiriinta joogta Norwey
2: Dimuquraadiyad, samafal iyo waxa la qiimeeyo
4: Dugsiga, waxbarashada iyo aqoon korodhsi
5: Shaqo, nolosha shaqada iyo suuqa shaqada
NAV (Ururka shaqaalaha iyo samafalka ee Norwey)
Ururrada shaqaalaha (fagforeninger)
Sharciga goobaha shaqada iyo sharciga fasaxyada-oo luqado badan ku qoran
Shaqo ka habsaamid
Sameynta shirkad la leeyahey
6: Carruur iyo qoys
7: Qaabkadhismeedka dadka iyo xaaladda dabeecadda
Norwey qeyb weyn oo dadka waaweyn ka mid ahi wey shaqeeyeen. Qiyaastii 70 % dumarka iyo 80 % raggu wey shaqeeyaan. Ku dhawaad kalabadh dumarka shaqeeya waxey ka shaqeeyaan shaqo gelin ah (deltid), halka ey 13 % keliya ragga shaqeeyaa ey ka shaqeeyaan shaqo gelin ah. Jiilka kowaad ee ajinebiga ah 55,6 % ayaa 2003 heystey shaqo mushahar ka soo galo.
Dadka aan shaqeynin, waa tusaale ahaan ardeyda, hooyooyinka guri joogta ah, kuwa lacagta ceymiska qaata iyo shaqodoonka.
Boqolkiiba 3,6 (3,6 %) ka mid ah dhammaan dadka waaweyni waa shaqodoon (abril 2005).
In la noqdo shaqodoon waxa looga jeedaa in aan la heysan shaqo laga helo mushahar, laakiin in shaqo la raadinayo, oo diyaar loo yahey si loo bilaabo shaqo isla markiiba. Boqolkiiba 9 (9 %) dadka ajinebiga ahi waa shaqodoon (2005).
Boggan shabakada netka waa qeyb dheeraad u ah mawduuca 5aad ee buugga waxbarashada (emne 5 i læreboka). Halkan waxaad ka akhriyi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduucyadan hoos ku qoran:
Xafiiska Shaqada (Aetat)
Ururada shaqaalaha (fagforeninger)
Taariikh nololeedka qofka (CV)
Codsi shaqo (Jobbsøknad)
Sharciga goobaha shaqada iyo sharciga fasaxa- oo ku qoran luqado badan
Shaqo ka habsaamid (fravær fra jobben)
La sameysto shirkad la leeyahey